Daraasad: Mushkiladaha ka dhaca Somaliland oo 80% ka dhasha dhulka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Daraasad: Mushkiladaha ka dhaca Somaliland oo 80% ka dhasha dhulka
A warsame 24 April 2015 24 April 2015
Hargeysa: Akaadamiyadda Nabada iyo horumarka maamulka Somaliland, ayaa sharaxday daraasad Hay’addoodu ku samaysay dhibaatooyinka dhulka oo ay sheegeen inay tahay halista ugu weyn ee Somaliland hadda taala.
Akadamiyadda ayaa todobaadkan Burco ku qabatay Kulan ay ka soo qayb-galeen barasaabyada gobolada iyo toddoba wasiir, halkaasi oo lagu soo bandhigay Daraasadda sidoo kalena lagaga dooday khatarta muranka dhulka.
“Waxaanu daraasad ku samaynay gobolada iyo degmooyinka Somaliland, waxaanuna ogaanay in Mushkiladda ugu weyn ee maanta Somaliland haysataa tahay dhulka oo is qabsigiisa iyo isku khilaafkiisuba aad u badan yihiin. Muddo aanu cilmi baaris ku wadnay arrintan waxaanu ogaanay in khilaafaadka Somaliland ka dhaca boqolkiiba sideetan (80%) ay dhaliyaan murannada dhulka” ayuu yiri Agaasimaha Akadamiyadda horumarka iyo nabada Somaliland, Maxamed Faarax.
Akaademiyadda Nabada iyo Horumarka ayaa ku talinaysa in la hirgaliyo Xeerar wanaagsan oo aan iska hor imanayn si wax looga qabto dhibaatooyinka dhulku sababo iyo inuu sii xoogaystaba.
“Dhulku waa waxa ugu muhiimsan ee Qaran ama Umaddi leedahay, markaa is qabsigiigu mar walba wuu imanayaa, Dhaqaalaha Somaliland wuxuu ku dhisan yahay xoolaha Nool, xooluhuna dhul bay daaqaan,kolkaas mar shakhsiyaad baa isku qabsanaya, mar Reero ayaa isku qabsanaya, mar maamulada degmooyinka ayaa isku qabsanaa, marna dad baa dhulkii sheeganaya inay iyagu leeyihiin, sida Dastuurka Somaliland qabana dawladda ayaa maamulkiida iyo lahaanshiisaba iska leh. Markaa waxay u muuqataa in dhulkii galay gacantii umadda taasina keentay is qabsi badan oo dhimasho, dhaawac iyo dhibaatooyin kaleba leh uu keenay” ayuu yidhi Agaasimaha Akademiyadda Nabada iyo Horumarka Somaliland oo BBC-da la hadlay.
Akademiyadda nabada iyo Horumarka Somaliland ayaa rumaysan inay jiraan Xeerarka lagu maamulo dhulka oo aan is waafaqsanayn iyo qodobka dastuuriga ah ee sheegaya in dawladdu leedahay dhulka oo aan la dabikhin. Waxay ku taliyeen in la sameeyo siyaasad cad oo arrintan wax lagaga qabto iyo Xeerar hufan oo is waafaqsan.
Mandheera: Gudoomiyihii deegaanka Carabiya oo la helay meydkiisa